Warka - BADBAADADA BIYAHA VS BAYAASHA BULSHADA VS WATERPROOF: WAA MAXAY KALA DUWAN?
VS CAYRISTA VS BAYAAN-KA-MUUJINTA VS WATERPROOF: WAA MAXAY KALA DUWAN?
Dhammaanteen waxaynu aragnaa tixraacyada aaladaha aan biyuhu karin, aaladaha u adkaysta biyaha iyo aaladaha biyaha celiya ee lagu tuurayo alaabada elektaroonigga ah. Su’aasha ugu weyn ayaa ah: Waa maxay farqiga u dhexeeya? Waxaa jira maqaallo badan oo ku qoran mowduucan, laakiin waxaan is tusnay inaan tuuri lahayn labadayada senti sidoo kale oo aan si dhow u eegayno farqiga u dhexeeya dhammaan saddexda erey, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo adduunka qalabka.
Ugu horreyntii, aan ku bilowno qeexitaanno qaamuus dhakhso ah oo qeexidda biyo-u-adkeysiga, iyo biyo-diidka, sida uu ku siinayo Qaamuuska Ingiriisiga ee Oxford:
Biyaha u adkaysta: awood u leh inay iska caabiyaan gelitaanka biyaha illaa heer laakiin gabi ahaanba maaha
Biyo-celiyaha: si sahal ah uma dhex geli karo biyaha, gaar ahaan natiijada ka soo baxeysa in loola dhaqmo ujeedada noocaas ah oo leh dusha sare
Biyo-la’aan: biyaha uma diidaan
Maxay Ka Dhigan Tahay Biyo-adkaysi?
Biyaha u adkaysta waa heerka ugu hooseeya ee ilaalinta biyaha ee saddexda. Haddii qalab loo calaamadeeyay inuu yahay mid biyaha u adkaysan kara macnaheedu waa in aaladda lafteeda loo dhisi karo qaab ay adag tahay inay biyuhu gudaha ka galaan, ama laga yaabo inay ku dahaadhan tahay walax aad u fudud oo ka caawinaya hagaajinta fursadaha qalab ee ka badbaada la kulanka biyaha. Biyaha u adkaysta waa wax aad ku aragto saacadaha dhexdooda, taas oo siinaysa awood ay ku celceliso celceliska gacmo-dhaqashada ama roobka yar ee roobka.
Waa Maxay Micnaha Biyaha-Ka-celiyaa?
Biyo-celiyaha daahan asal ahaan waa talaabo kaliya oo laga qaado lakabyada biyaha u adkeysta. Haddii qalab lagu calaamadeeyay inuu yahay biyo-celiyaha dhab ahaantii wuxuu leeyahay astaamaha lagu garto, waad qiyaastay, dib uga celin kartaa biyaha, samaynta biyo-biyood. Aaladda biyaha celisa waxay u taagan tahay fursad aad u sareysa in lagu daboolo nooc ka mid ah filimka nanotechnology-ga khafiifka ah, ha ahaato gudaha, banaanka, ama labadaba, waxayna leedahay fursad aad uga wanaagsan inaad biyaha istaagto marka loo eego qalabkaaga celceliska ah. Shirkado badan ayaa sheegta biyo-celin, laakiin ereyga si adag ayaa looga doodaa maxaa yeelay biyaha celiya waarta waa dhif iyo sababtoo ah dhammaan su'aalaha iyo walxaha aan la saadaalin karin ee la xiriira.
Waa Maxay Micnaha Biyuhu?
Biyuhu qeexitaanku waa qumman yahay, laakiin fikradda ka dambeysa maahan. Waqtigaan la joogo, ma jiro halbeeg warshadeed oo aasaasan si aalad loogu kala saaro inay tahay mid aan biyuhu ka hortagi karin. Waxa ugu dhow ee hadda la heli karo, illaa inta laga hadlayo cabirka qiimeynta, ayaa ah Qiimeynta Ilaalinta Ingress cabirka (ama IP Code). Miisaankani wuxuu u qoondeeyaa shay qiimeyn ah 0-8 marka la eego sida wax ku oolka ah aaladda biyaha ka celinaya inay galaan, aka soo gelida biyaha. Sida iska cad, waxaa jira cillad weyn nidaamkaan qiimeynta ah: Kawaran shirkadaha, sida annaga oo ah HZO oo aan ka walaacsanayn in biyaha laga ilaaliyo aaladda si looga badbaadiyo waxyeelada biyaha? Dahaarkayagu wuxuu u oggolaadaa biyaha gudaha aaladaha, laakiin qalabka aan biyuhu ku xirnayn ee aan ku xirno aaladaha ayaa ka ilaalinaya suurtagalnimada waxyeello kasta oo biyo ah. Shirkadahaani waxay bixiyaan adeeg aan ku habboonayn waxa cabbiraadda IP-ga, laakiin wali waxay maareeyaan inay xal u siiyaan macaamiishaas doonaya ka ilaalinta waxyaabaha jira iyo ka cabsashada “dhimashada musqusha.”
Isticmaalka ereyga biyuhu waxay sidoo kale loo qaadan karaa inay tahay tallaabo khatar u ah shirkado badan. Sababtuna waxay tahay ereyga biyuhu sida caadiga ah wuxuu gudbiyaa fikradda ah inay tani tahay xaalad joogto ah, iyo in wax kasta oo 'biyuhu xireen' aysan waligood fashilmi doonin xiriir la leh biyaha – xaaladdu si kasta ha noqotee.